ထွေးမြ – Grab Love Story
ညဦးက အဖန်ရည်သောက်တာ များသွားသည်ကတစ်ကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်သိပ်ကြိုက်တဲ့ ဘာညာကွိကွလဲ မလုပ်ရတာ ကြာပြီဆိုတော့ စိတ်ဆာလာတာက တစ်ကြောင်းကြောင့် အိပ်ယာကနိုးလာတယ် ။ အလိုအပ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ မိန်းမကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ တရှူးရှူးနဲ့အိပ်နေတာများ ထမီတောင်လန်ပြန်လို့ ။ ဟင်..အမွှေးတွေ ရိတ်ထားပါလား ။ အမြင်တစ်မျိုးထူးနေတဲ့ မီးလောင်ဖုကြီးလို စောက်ဖုတ်ဖေါင်းဖေါင်းကြီးက ကျုပ်စိတ်ကို မြှူဆွယ်နေသလိုဘဲ ။ ဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာ စောက်ဖုတ်မှာမြှော့ပါတဲ့မိန်းမကို လိုးဖူးတဲ့ သူတိုင်းသိကြလိမ့်မယ် ။ ကျုပ်မှာ တန်းတန်းစွဲ ဖြစ်နေရတာပေါ့။ပြီးတော့ ထားခင်က အောက်ပေးလဲကောင်းတယ် မဟုတ်လား။ မနာလိုဖြစ်မနေပါနဲ့ဗျာ။ကျုပ်တောင် ကံကောင်းလွန်းလို့ ။ခင်ဗျားတို့လည်း သိတဲ့အတိုင်းဘဲ မိန်းမအယောက်တစ်ရာမှာ တစ်ယောက်တောင် စောက်ဖုတ်မြှော့ပါဖို့ဆိုတာ အရှားသားမဟုတ်လား။ အဲတာကြောင့် ထားလေးကို ကျုပ်စွဲနေရတာပေါ့ဗျာ။ထားခင်ဟာ ဖင်သရမ်းတယ်လို့ နာမည်ပျက်ရှိပေမယ့် ကျုပ်နဲ့ကျတော့လည်း ငြိမ်လို့ ။ကြင်နာတတ်တာလည်း လွန်ရောဘဲ။ရွာမှာဆို ကျုပ်လည်း ဆရာကြီးတစ်ဆူလို မိန်းမနဲ့ပတ်သက်ရင် နာမည်ကြီးဘဲ ။ ပျိုပျိုအိုအို တွေ့မရှောင် အကုန်စားလို့လေ ။ တကယ်တော့ ကျုပ်ဟာ တကူးတက လိုက်ဖန်တီးနေတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ ။သူတို့မိန်းမတွေက ကျုပ်ကို လိုက်ကပ်နေကြတာဗျ ။
သူမတို့ယောကျာ်းတွေဟာ တကိုယ်ကောင်းဆန်တယ် မသာကောင်ကြီးတွေဟာ သူတို့ အာသာပြေရင်ပြီးရော တက်ခွပြီးဆော်ဖို့ဘဲ ။သူမတို့ အလိုကို နားမလည်ဘူး ဘာညာဆိုတော့ ကူညီပေးရတာပါဗျာ။ ရိုင်းရိုင်းပြောရယင် ယောကျာ်းဖါလို သဘောထားကြတာပါ။တခုရှိတာက ကျုပ်ဟာနဲ့ ထိလိုက်ပြီးရင်တော့ ကျုပ်မှကျုပ်ဖြစ်သွားတာတော့ မတတ်နိုင်ဘူး။ ကျုပ်သား မောင်ခိုင်ကိုလည်းပြောထားရသေးတယ် ။မင်းမိန်းမယူမယ်ဆိုရင်ရွာက ကလေး မလေးတွေကို မယူနဲ့လို့ တော်ကြာမောင်နှမချင်း ယူမိမှာစိုးလို့လေ။ပြောရရင် မထားခင်နဲ့တွေ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း ကျုပ်ကိုယ်တိုင် ခံရတဲ့အလှည့်ရောက်သွားတယ်။ ထားလေးက ကျုပ်ကိုပြုစားလိုက်တယ်လို့ လူတွေက ပြောကြတာဘဲ။ တခါတလေ ကျုပ်ကိုယ်တိုင်တောင် သံသယဖြစ်ရတယ် ။နေ့တွေ၊ညတွေ မဟုတ်တော့ဘူး။ အချိန်ရှိတိုင်း လိုးနေချင်တော့တာဘဲ။ မြှော့ပါတဲ့ စောက်ဖုတ်နဲ့အထိခံရတဲ့ ယောကျာ်းတစ်ယောက်ဟာ ဘာညာဖြစ်သွားရောဆိုတဲ့ ငယ်ငယ်က ကာလသားကြီးတွေပြောတဲ့စကားကို ယုံတမ်း စကားလို့ထင်ခဲ့တာ။ ခုတော့ ကျုပ်လည်း ဆရာကြီးကနေ တပည့်ကြီးအဖြစ် ကျေကျေနပ်နပ်ကြီးပေါ့ဗျာ ။ကျုပ်လည်း ထားခင်ကို ရွတ်ကနဲ တစ်ချက်နမ်းလိုက်တယ် ။ လင်မယားတွေအချက်ပေး နည်းအတိုင်းပေါ့။ တနေကုန် ပင်ပန်းထားလွန်းလို့ ထင်ပါရဲ့။မနိုး။အိပ်ပါစေတော့လေ။ဆီးသွားမလို့ အိပ်ယာပေါ်က အသာဆင်းပြီး အောက်ထပ်ကို ဆင်းလာခဲ့တယ် ။ အလိုက်မသိတဲ့ ကျုပ်ရဲ့ကြီးမားရှည်ထွားလှချည်ရဲ့လို့ မိန်းမတွေပြောကြတဲ့ ငပဲကြီးကတော့ ပုဆိုးဖေါင်းနေအောင်ကိုင်းကိုင်းကြီး ထောင်နေတုန်းပင် ။ အိမ်သာသွားရင်းနဲ့ သားမောင်ခိုင်ရဲ့အခန်းကို တစေ့တစောင်းလှမ်းကြည့်တော့ ပြန်မရောက် သေး။ ညဥ့်နက်လှပြီ ။
မနက်ကျ ခေါ်ဆုံးမရအုံးမယ် ။သေးပေါက်ပြီးပြန်တက်လာတော့ …”အင်း..အင်း. အိုး. အိုး..အ ”တိုးတိုးလေးကြိတ်ငြီးသံကိုကြားလိုက်ရတယ်။ ကျုပ်ရင်ထဲ တမျိုးကြီးဖြစ်သွားတော့တာဘဲ။အသာနားစွင့်ပြီး အသံလာရာကိုကြည့်လိုက်တော့ ထွေးမြအခန်းထဲက။ ကုတင်လှုပ်သံတကြွိကြွိမြည်လို့ ”ပြွတ်..ပလွတ် ဖတ် ဖတ် အင်းးးးးအ…””တောက်…”ကျုပ် အခုနက ရင်ထဲ လှုပ်ကနဲဖြစ်သွားတာတွေပျောက်လို့ ဒေါသတွေအလိပ်လိပ် ထွက်လာတယ်။ကျုပ်မှာတော့ မစားလောက်သေးလို့ အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့စောင့်နေတာ။ ဘယ်ကောင် လာဆော်နေပြီလည်း. မသိဘူး..။ခြေသံမကြားအောင်သွားပြီး အခန်းတခါးကို အသာဟကြည့်တော့မှပဲ …..’ဟင်..ခွေးသား အဖေထက်တောင်လျှင်နေပါလား’ပြူတင်းပေါက်က ဝင်လာတဲ့ လရောင်နဲ့သေသေချာချာမြင်ရတာပေါ့ဗျာ။ပေါင်နှစ်ချောင်းကိုဖြဲထားတော့ အဖုတ်ကလေးကဖူးဖူးဖေါင်းဖေါင်းနဲ့ ဟိုခွေးသား တအားတွယ်နေလိုက်တာများ လောကကြီး သူတို့နှစ်ယောက်ပဲ ရှိနေသလို။ တပြွတ်ပြွတ် တဖတ်ဖတ်နဲ့။ကုတင်တောင် ပြိုကျမှာ စိုးရတယ်။အောက်ကဟာမလေးကလည်း သူ့အမေ အလိုးခံတဲ့ပုံစံအတိုင်း မောင်ခိုင့် တင်ပါးနှစ်ဘက်ကို ဆွဲကိုင်ပြီး ဖိချရင်း စကောဝိုင်းသလို ကော့ကော့ပြီးခံနေလိုက်တာများဗျာ ”စောင့် စောင့်…အိုး.အင့်..အင့် မညှာနဲ့တော့ တအားလိုး ဘလွက်..ဗြွတ်..ငါခံနိုင်ပြီ..အ..အင်း….”အောက်ပေးကောင်းလှချည်လားကွယ့် မအေတူသမီးလေးရဲ့ ။ ငါ့သား မင်းကံကောင်းတယ် ။ အေးလေ ငါလည်း တစ်နေ့ ကံကောင်းရအုံးမှာပေါ့ကွာ….ဟင်း။သက်ပြင်းကြိတ်ချရင်း ဘယ်လိုကြံရမလဲဆိုတဲ့ အတွေးတွေနဲ့ဘဲ အပေါ်ပြန်တက်လာခဲ့ရတယ်။တံခါးကိုတော့ သေသေချာချာပြန်ပိတ်ခဲ့ရတယ်။တော်ကြာ ထားခင်ကြားသွားမှဖြင့် ကျုပ်သားငတ်နေအုံးမယ်။ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်ဗျာ။ကာမ အရသာကို ကျုပ်ကိုယ်တိုင် မြိန်မြိန်ယှက်ယှက်ကြီး ခံစားနေတာဘဲ။မထားခင်ဘေးတွင် အသာဝင်အိပ်ယင်း နှဖူးပေါ်လက်တင်ကာ အကြံထုတ် စဉ်းစားနေရင်း ပေါင်လုံးတုတ် တုတ်လေးခွဆုံက အဖုတ်ဖေါင်းဖေါင်းလေးကို ပြန်ပြီးမြင်လာတော့တယ် ။
အရင် သည်ကောင်မလေးရေချိုးလို့ လူလစ်ရင် ကျုပ်ချောင်းချောင်းကြည့်ဖူးပါတယ်။မွှေးညှင်းနုလေးတွေက ဆီးခုံမှာ ပေါက်ကာစမို့ ဖိုကနေချကာစ ပေါင်မုံ့လို တင်းတင်းလေးဗျာ။ မလိုးဘဲနဲ့ လျှာဖျားလေးနဲ့ထိုးထိုးပြီးလျှက်လိုက်ရရင်..တော့လား……”ထားခင် ””ရှင် အင်…ဟင် အကိုကြီးလီးက တအားတောင်နေပါလား”ဦးချစ်ခင်သည် အတူအိပ်နေသော မိန်းမဖြစ်သူ မထားခင်ကိုဖက်ရင်း ခေါ်လိုက်သည်။မထားခင်က သည်လို လင်မယားအတွေ့အကြုံများလို့ အထာကျွမ်းသည်။သူ့ယောကျာ်း ဘာဖြစ်ချင်နေပြီဆိုတာ တန်းသိလိုက်ပြီ။ ပက်လက်အိပ်နေရာမှ လှည့်စောင်းလိုက်ပြီးဘယ်လက်ဖြင့် ပေါင်ကြားထဲမှ ငေါင်းစဉ်းစဉ်းဖြင့်ထောင်ထနေသော လီးကြီးကို ပုဆိုးပေါ်မှပင် လှမ်းကိုင်လိုက်လေသည် ။ ဦးချစ်ခင်လည်း သူ့မိန်းမနိုးလာပြီဖြစ်လို့ သူ၏ပုဆိုးကိုချွတ် ကာခြေထောက်ဖြင့် ကုတင်ခြေရင်းသို့ ကန်ထုတ်လိုက်သည် ။ ထိုအခါ မထားခင်သည် လီးထစ်ကြီးပြဲလန်နေသော လီးကြီးကို ခပ်ဆတ်ဆတ်လေး လေး၊ငါးချက်ခန့်ထုပေးလိုက်ရာ ထောင်ထနေသောလီးတံကြီးထိပ်မှ လရည်ကြည်များ စိမ့်ထွက်လာလေသည်။”အား..ပါး ပါး ” ဦးချစ်ခင်အတွက်တော့ သူ့မိန်းမ ဘယ်လိုလုပ်ပေးပေး ကောင်းနေတော့တာဘဲ။ အဲတာတောင် သမီးဖြစ်သူကို ဆော်ချင်နေသေးသည် ။လောဘ ကြီးပါပေ့ ဦးချစ်ခင် ။မထားခင် လီးကြီးကို ဆုပ်ကိုင်ထားလျှက်ပင် အိပ်နေရာမှ ထလိုက်သည်။ခြောက်သွေ့နေသော သူမနှုတ်ခမ်းထူအမ်းအမ်းကြီးကို လျှာဖြင့် လျှက်လိုက်ပြီး ဂွေးလပြွတ်ကြီးကို ပြွတ်ကနဲ ပါးစပ်ထဲ စုပ်သွင်းလိုက်သောအခါ အကြောတွေ ဖုဖုဖေါင်းဖေါင်းနှင့် အပြိုင်းပြိုင်းထနေသော လီးတံကြီးမှာ ဆတ်ကနဲ ပိုမိုတင်းတောင်သွားသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ အကိုကြီး ဘာအကြိုက်ဆုံးဆိုတာ သူမသိတာပေါ့။
လက်တဖက်က ကုတင်ခြေရင်းရောက်နေသော ဖက်လုံးကို ယူလိုက်ရာ ဥိးချစ်ခင် အလိုက်သင့်ပင် ဖင်ကို ကြွပေးလိုက်သည်။ခေါင်းအုံးခုလိုက်သောကြောင့် ကြွတက်လာသော ဖင်စအိုဝကို လျှာဖျားလေးနှင့် ထိုးကလိခံလိုက်ရသော် ဦးချစ်ခင် တအင်းအင်း တဟင်းဟင်းဖြစ်ကာ…”အိုကွယ်…ထားလေးရယ် အကိုကြီးကို စွဲနေအောင် တမင်လုပ်နေတာလား.အ..အိုး….”လက်ကလည်း လီးတံကြီးကို လထစ်ဖျားမှ အရင်းတိုင်အောင် တင်းတင်းကြီး ဆုပ်ကိုင်ပြီး တစ်ချက်ချင်းထုပေးနေရာ လီးကြီးထိပ်မှ တစိမ့်စိမ့်ထွက်ကျလာသော လရည်ကြည်များကြောင့် လီးတံကြီးတစ်ချောင်းလုံး ရွဲရွဲစိုနေရာ လက်ထဲတွင် တကိုင်ကြီးနှင့် စီးပိုင်နေတော့သည် ။လမွှေးလိမ်လိမ်ကောက်ကောက်ကြီးများ ပေါက်နေသော ဆီးခုံကိုမြတ်မြတ်နိုးနိုး ‘ရွှတ်ကနဲ’နမ်းလိုက်ပြီး သူမယောကျာ်း၏ ရင်ခွင်ကျယ်ကြီးပေါ်သို့ တိုးဝင်တက်လိုက်သည် ။ ထို့နောက် ချစ်လင်၏ပါးပြင်ကို နမ်းလိုက်လေသည်။”ဟင် ထားလေးငိုနေတယ်..”မျက်ရည်ပူများ သူ့ပါးပေါ်စိုစွတ်သွားရာ ဦးချစ်ခင်လည်းမှိန်းပြီးနေသော မျက်လုံးပြူးကျယ်သွားပြီး စိုးရိမ်တကြီး မေးလိုက်သည်။”ကျမ အားငယ်လို့ပါ အကိုကြီးရယ်။အကိုကြီး စိတ်ကျေနပ်အောင် လုပ်မပေးနိုင်တော့လို့ –ဟင့်..အဟင့်.. ကျမကို ပစ်မသွားပါနဲ့နော်”နည်းနည်းတော့ စိတ်တိုရသည် ။ မတတ်နိုင် ။”မင်း သားအိမ်က အောင့်တုန်းလား။ မဖြစ်ဘူး..မဖြစ်ဘူး။ဆေးရုံသွားပြမှ ဖြစ်မယ်။ အင်း..နော်ကူးသာ ကရော ဘာပြောသေးလဲ”မထားခင် ရွာက သားဖွါးဆရာမလေး နော်ကူးသာနှင့် ပြကြည့်ပြီးပြီ။”ထားခင်ကိုမေးတယ် ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ဆက်ဆံကြလဲတဲ့””ထားလေးက ဘယ်လိုပြန်ဖြေလိုက်လဲ””အို..အကိုကြီးကလည်း ဘယ်လိုဖြေရမလဲ..မဖြေတတ်ပါဘူး။ အကိုကြီးပဲ သူများကိုနည်းမျိုးစုံနဲ့ လုပ်ခဲ့ပြီးတော့။ပြီးတော့ မထားခင် အပေါ်ကနေပြီး ဆက်ဆံဘူးလားတဲ့။
ကျမလည်း အကိုကြီးက အဲသည်လိုနည်းကြိုက်လို့ မကြာမကြာ တက်တက်ဆောင့်ပေးတဲ့အကြောင်း ခပ်ကြွားကြွားပြောလိုက်တာပေါ့””ဟာ ကွာ..””အကိုကြီးဟာမက ဘာပြောတယ်မှတ်လဲ။ အင်း..လေ ဦးဟာကြီးက အရှည်ကြီးဆိုတော့ အမ အဲသလို ဆက်ဆံတာ အရမ်းထိမှာပေါ့နော်တဲ့.. နှမျောတသတဲ့ အသံနဲ့…သည်ကောင်မက သူလင်အပြင် ကာလသားတွေနဲ့တရုံးရုံးဖြစ်နေတာတောင် သူများယောကျာ်းကို တမ်းတမ်းတတနဲ့ …စိတ်တိုတယ်။””ထားလေးကလဲကွာ မင်းနဲ့ညားပြီးကတည်းက ငါတစ်ခါမှ မတစ်ခါတော့တာ မင်းလည်းသိသားနဲ့ ။ကဲပါ..ဘာ ဖြစ်တာတဲ့လဲ””ကျမလည်း ကောင်မခိုင်းသလို ထမီချွတ်ပြီးပေါင်နှစ်ချောင်းထောင်ပြီး ကားပေးလိုက်တော့ အမွှေးတွေ ရိတ်မယ်နော် ဆိုပြီးရိတ်ပစ်လိုက်တယ်ရှင့်.. ပြီးတော့ လက်အိပ်စွတ်ပြီးကလိတော့တာပဲ။စိတ်မဆိုးနဲ့နော် ။ကျမလဲ မိန်းမအချင်းချင်း လုပ်ပေးတာ တခါမှမခံဘူးတော့ တစ်မျိုးကြီးနဲ့ ခံလို့ကောင်းလာတော့ အကိုကြီးကို လုပ်ပေးသလိုမျိုး ညှစ်ပေးလိုက်မိတယ် ။အမဟာက မြှော့ပါတာကိုး ..အဲတာကြောင့် ဦးက စွဲနေတာဆိုပြီး ပြောပြောဆိုဆို ကျမအစေ့ကို ကုန်းစုပ်တော့တာဘဲ ။ ဦးဟာကြီးနဲ့ ထိုးထိုးလိုးပြီး ဦးလရေတွေ ပန်းပန်းထည့်ထားတဲ့ အမရဲ့စောက်ဖုတ်ကိုမှုတ်ရတာ အရမ်းအရသာရှိတာပဲတဲ့။ နောက်တော့ အင်္ကျီကိုလှန်ပြီးသူ့နို့ပျော့တွဲတွဲကြီးနှစ်လုံးကို စုပ်ခိုင်းတယ်။ကျမလည်း အကိုကြီးလုပ် လုပ်ပေးသလိုမျိုး နို့သီးခေါင်းကလေးကို လျှာနဲ့ထိုးထိုးပြီး နို့အုံကြီးတစ်ခုလုံးကိုပါ စုပ်စုပ်ပေးလိုက်တော့ ကောင်မ ထွန့်ထွန့်ကိုလူးနေတာပဲ။အဲသည်အချိန်မှာပဲ ရွာအလယ်ပိုင်းက ဟိုအရက်သမား ညီအကိုရောက်လာသံကြားရတယ်။
သူ့နို့ကြီးနှစ်လုံးလှန်ရက်တန်းလန်းနဲ့ထွက်သွားပြီး လာ..လာကြ…အတော်ဘဲဆိုပြီး အိပ်ခန်းထဲခေါ်သွားပြီး လိုးကြတော့တာဘဲ အကိုကြီးရယ်။ကျမရှိနေတဲ့ အခန်းနဲ့ ကပ်လျှက်ဆိုတော့ ကျမလည်း ထရံပေါက်က ချောင်းကြည့်လိုက်မိတယ်။အကိုကြီးကောင်မက မတ်တပ်ရပ်လျှက် အလယ်မှာ။ ဟိုညီအကိုနှစ်ယောက် တစ်ယောက်က စောက်ဖုတ်ထဲ ထည့်ပြီး၊တစ်ယောက်က ဖင်ကို လိုးနေလိုက်ကြတာ ပက်ပက်စက်စက်ကြီး။ နှစ်ယောက်သား တစ်ပြိုင်တည်းစောင့် လိုက်ချိန်ဆို ကောင်မ တစ်ကိုယ်လုံးမြောက်မြောက်တက်သွားပြီး ‘အင့်ကနဲ…အင့်ကနဲ’ နဲ့ အလိုးခံနေတော့တာပဲ။ ။ ကျမလည်း ထမီကောက်စွပ်ပြီး အခန်းထဲက ထွက်လိုက်တော့..ကောင်မယောကျာ်းလေ သူ့မိန်းမ တော်သလင်းဇာတ်ခင်းနေတာကိုချောင်းကြည့်ပြီး လီးငေါက်တောက်ကြီး ထောင်ပြီးဂွင်းထုနေတာ တွေ့လိုက်ရတော့တာဘဲ အကိုကြီးရယ်။ အဲသလို တစ်ပြိုင်နက်ထဲမှာ ယောကျာ်း သုံးယောက်ကို အာသာဖြေပေးနိုင်တာမြင်ရတော့ ကျမလေ အရမ်းအားငယ်မိတယ် ။ ထားခင် အရမ်းချစ်တဲ့ အကိုကြီးကို ထားခင် ကျန်းမာရေးမကောင်းလို့ ကျေနပ်အောင်လုပ်မပေး နိုင်တော့ စိုးရိမ်မိတာပေါ့”အင်းလေ အကိုကြီး အာသာပြေအောင် လက်နှင့်ဘဲလုပ်ပေးရတော့မည်။ ဖင်ကိုတော့ပေးမခံရဲတော့။ဟိုအရင် ကဲခဲ့ကြစဉ်က လှေကြီးထိုး၊တပေါင်ကျော်၊စည်တော်ရွမ်း၊ပုဇွန်တုပ်ကွေး၊ခွေးလိုး….အို အများကြီး၊ နည်းမျိုးစုံနှင့်အားမရနိုင်ဘဲ ဖင်ကိုပါ ပေးအလိုးခံခဲ့သည်။ လထစ်ကြီးက ကြီးလွန်းလို့ ဗယ်စလင်(ခေါင်းလိမ်းဆီ) ကိုဖင်ဝကော လီးကြီးကိုပါ သုတ်ပြီး လထစ်ဖျားနှင့် သွေးတိုးစမ်းပြီးထိုးထိုးပေးစဉ်က ခံလို့အကောင်းသား ။ နောက်လထစ်ကြီးမြုပ်သွားအောင် ထိုးချခံလိုက်ရသောအခါ….’အမလေး…အမေရဲ့..’ပြန်တွေးမိရင်တောင် ရင်တုန်တယ်။ဖင်ကွဲသွားပြီး ၃ရက်ခန့်ချီးမပါနိုင်။”မထားခင်ရေ…မင်းဦးကြီးလာဟေ့။ မင်းအမေ နေမကောင်းဖြစ်နေလို့တဲ့ကွာ””ရှင်…လာပြီ လာပြီ”မထားခင် မီးဖိုခန်းတွင် ချက်ပြုတ်နေရာမှ အမေနေမကောင်းဆိုသည့် စကားကြောင့် စိုးရိမ်တကြီးဖြင့် အိမ်ရှေ့သို့ထွက်လာသည်။”ဟင်..ဦးကြီး ချွေးတွေသံတွေနဲ့၊ ဟောသည်မှာ ရေအေးအေးလေးသောက်လိုက်ပါအုံး။
အမေက သာမန်နေမကောင်းဖြစ်တာပါနော် ။ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဟင်””အေးကွာ နင့်မလဲ ရွာကိုတစ်ခေါက်တစ်ကျင်းတောင် ပြန်ဖေါ်မရဘူး။အခုနင့်အမေ တော်တော်နေမကောင်း ဖြစ်နေလို့ ငါလာပြောတာဘဲ။ကဲကဲ..ငါပြန်တော့မယ်။မြို့ပေါ် နည်းနည်းပါးပါးဝယ်စရာရှိတာဝယ်အုံးမှာမို့။ နင့်ဘာသာပဲသွားနှင့်တော့””ဟုတ်ကဲ့”မိခင်အတွက် ပူပန်မှုများပိုနေရသည်။”အေးလေ..ငါတော့ အလုပ်တွေလက်စ မပြတ်သေးလို့မလိုက်နိုင်ဘူးကွာ။မင့်သမီးသာ အဖေါ်ခေါ်သွားတော့””သမီးရေ..ထွေးမြ ””ရှင်.လာပြီအမေ ””နင့်မလဲ ဈေးဝယ်သူမရှိတာနဲ့ ဂျာနယ်တွေ ကောက်ဖတ်တော့တာပဲ။သူ့ကိုသူ ယောကျာ်းလေးများမှတ်နေသလားမသိဘူး”ဟီ..ဟိ ဂျာနယ်ကြားထဲမှာ မောင်ခိုင်လူဆိုးလေးပေးထားတဲ့ ပုံတွေကြည့်နေတာ သိလဲသိဘဲနဲ့။”နင့်အဖွါး နေမကောင်းလို့ သွားရမယ် လိုက်ခဲ့””မလိုက်ချင်ဘူး အမေရယ်။သမီး အဝှါတွေ ဖြစ်နေလို့။အဖွါးတို့ရွာက အဝေးကြီး လမ်းလျှောက်ရမှာ”ဦးချစ်ခင် မီးစက်ဘေးတွင် ခွတစ်ချောင်းနှင့် အလုပ်ရှုပ်နေဟန်ဆောင်ရင်း နားစွင့်နေရာ’အင်း..ချဲမထိုးဘဲ ပေါက်တော့မယ်ထင်ရဲ့။စားရကံကြုံ တော့ မုတ်ဆိပ်ပျားစွဲတော့တာဘဲ။”’အကိုကြီးရေ သမီးက မလိုက်နိုင်ဘူးတဲ့။အကိုကြီးဘဲ လိုက်ခဲ့ပါနော်””ခက်တော့တာပဲ။ဟိုကောင်မောင်ခိုင်ဘယ်သွားလဲ။သမီးရေ..နင့်မောင်ကို သွားလိုက်ခေါ်စမ်း”စိတ်ညစ်လိုက်တာ။တကယ်ဘဲ။ သူများက အလိုးမခံရတော့မှာစိုးလို့ အဝှါဖြစ်နေတယ်လို့ ညာပြောလိုက်တာ။မောင်ခိုင့်ကိုခေါ်သွားတော့ သူများကိုဘယ်သူက အဝှါလုပ်ပေးမှာလဲ။ဟင်း…”ကဲ…ကဲထားခင် အဝတ်အစားတွေ ထုပ်ပိုးတော့လေ။တော်ကြာနေမြင့်နေအုံးမယ်။ အင်း…ပိုက်ဆံ လုံလုံလောက်လောက်ယူသွား။ပြီးတော့ သိပ်လည်းကြာကြာမနေနဲ့ကွာ။မခွဲဘူးတော့ အကိုကြီးက လွမ်းနေမှာကွယ့်”ကလေးတွေ မရှိတုန်း မထားခင် ကြွေသွားအောင် ခပ်ချွဲချွဲလေးပြောလိုက်သည်။သူ့ပေါ်စိတ်ချ လက်ချနှင့် သံသယကင်းမှ ဟိုမှာကြာကြာနေမှာ မဟုတ်လား။
သမီးလေးရေ..ခုတော့ ဖေကြီးကံကောင်းမယ့်အလှည့် ရောက်လာပြီပေါ့။”သမီးရေ ခြံတံခါးပိတ်ပြီးပြီလား””ဟုတ်…””အေး..အေး အဲတာဆို.. ဖေကြီး ထမင်းစားချင်ပြီ ခူးတော့ကွယ်””ဟား…ပွတာပဲ ..ကြက်သားဟင်းပါလား။မွှေးကြိုင်နေတာဘဲ””အေးကွာ ကြက်ဖကလေး မှိုင်တိုင်တိုင်ဖြစ်နေလို့ ကြက်နာ မဖြစ်ခင်ချက်လိုက်တာ”ဦးချစ်ခင်မှာ မိန်းမများစွာထဲတွင် အပျိုစစ်စစ်ကလေးများစွာကိုလည်း အမှန်တကယ် စားသုံးခဲ့ဘူးသူဆိုတော့ ဘယ်အနေအထားမှာ ဘယ်လိုစည်းရုံးရမည်ကို အထာကျွမ်းသည်။ခုလည်း…အိမ်တွင် ထွေးမြနှင့် နှစ်ယောက်တည်းရှိပေမယ့် အလျှင်စလို မလုပ် ။ နေရာထိုင်ခင်းလုံခြုံမှုရှိကြောင်း သိနေအောင် ထွေးမြကို ကိုယ်တိုင်ခြံတံခါး၊အိမ်တံခါးများ ပိတ်ခိုင်းလိုက်လေသည် ။ပြီးတော့ သွေးသားဆူဖြိုးစ အရွယ်မို့ သားဖြစ်သူနှင့်နေ့တိုင်း အဲ..ညတိုင်းပေါ့ အလိုးခံနေသည်ကို သိပေမယ့် …သူ့လီးကြီးနဲ့ ခံချင်လာအောင် စည်းရုံးရဦးမည်။ပထွေးဆိုပေမယ့် ငယ်စဉ်ကတည်းက ‘ဖေကြီး’လို့ခေါ်ခဲ့တော့ လေးစားတာတွေ၊ အရှက်အကြောက်တွေ ဘာမှ မရှိတော့အောင် ကြက်သားဟင်းထဲတွင် ဆေးခြောက်ကို ပိတ်ပါးလေးနှင့်ထုပ်ပြီး ထည့်ချက်ထားသည်။”စားလို့ကောင်းရဲ့လား သမီး၊ဖေကြီးကိုယ်တိုင် ချက်ထားတာ””ကောင်းလိုက်တာ..မွှေးကြိုင်ပြီး၊ ထမင်းမစားဘဲ ဟင်းတွေချည်းသာ ထိုင်စားချင်တော့တာဘဲ။ဖေကြီးကအရမ်းတော်တာပဲ””စားလေကွယ့် ဖေကြီးတို့နှစ်ယောက်ပဲရှိတာ။ ကာလသားချက်လို့ခေါ်တယ် ။ ဟင်းရည်များများသောက်ပေး””ဟီး…ဟီး..””ဘာလဲကွယ့်..သမီးလေးရဲ့”ထမင်းစား စားပွဲအောက်မှဦးချစ်ခင်ခြေထောက်ကို လှမ်းဆွဲပြီး ။ တဟီဟီနှင့် ရီနေသည်။သိလိုက်ပြီ ထွေးမြ ဆေးခြောက်မူးနေပြီဆိုတာ ။ သူလိုချင်တာ သည်အနေအထားလောက်ပဲ။”ဖေကြီး..သမီးလေ ရင်ထဲမှာ တလှပ်လှပ်နဲ့ ရီချင်သလိုလို၊ပျော်သလို အို..ဘယ်လိုကြီးလဲမသိဘူး””ကဲ..ကဲ အဲတာဆိုလည်း တော်လိုက်တော့ ”ဦးချစ်ခင်သည် ထွေးမြကို သူကိုယ်တိုင် ချိုင်းနှစ်ဘက်ကြားလက်လှျိုလိုက်ပြီး နို့အုံလေးကို အမှတ်တမဲ့ပုံစံနှင့် မသိမသာဆုပ်ကိုင်ပြီး ဆွဲထူလိုက်သည်။လက်ကိုဆပ်ပြာနှင့် သေသေချာချာဆေးကြောပေးကာ ပခုံးကိုဖက်ပြီး အိမ်ရှေ့ဧည့်ခန်းသို့ ခေါ်လာသည်။ ထမင်းစား စားပွဲပေါ်တွင်မတော့ ထွေးမြ လက်တရမ်းရမ်းနှင့် လျှောက်နှိုက်ထား သောကြောင့် စားလက်စများ ပိုးလိုးပက်လက်ကျန်ခဲ့သည် ။
နှစ်ယောက်ထိုင် ကုလားထိုင်တွင် အတူယှဉ်တွဲထိုင်လိုက်ရင်း..”သမီးလေး..”ဦးချစ်ခင်သည် ထွေးမြပေါင်တံလေးကို မသိမသာကိုင်ပွတ်ပေးရင်း ခေါ်လိုက်လေသည် ။ခြံတံခါးသာမက အိမ်တံခါးပါပိတ်ထားသောကြောင့်အပြင်မှ ဘယ်သူမှ မမြင်နိုင်။ လက်တဖက်ကလည်း ကုလားထိုင်နောက်မှီပေါ် တွင်တင်ကာ မထိတထိထွေးမြကို ဖက်ထားသလို၊မဖက်သလိုနှင့်။”ဖေကြီး..သမီးလေး””အင်…””သမီး အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ ””၁၉ နှစ်ကျော်ပြီလေ ဖေကြီးရဲ့ ””သမီးလေးမှာ ရည်းစားရှိနေပြီလားဟင် ””အာ…ဖေကြီးကလည်း၊သည်မှာကိုင်ကြည့် ” ပြောပြောဆိုဆိုနှင့် သူမပေါင်ပေါ်ရောက်နေသော ဦးချစ်ခင်လက်ကို ဆွဲယူကာ သူမနို့ကလေးပေါ် ဖိကပ်ပေးလိုက်သည်။ လုံးလုံးတင်းတင်းလေးနှင့် ရှိနေတုန်းပင်။ အပျိုဖြစ်စတွင် ရှိရမည့် နို့သီးခေါင်းအရင်းမှ အကြိတ်၊အခဲလေးများမှာမူ မရှိတော့။မောင်ခိုင့်လက်စာ မိထားပြီးပြီ မဟုတ်လား။ အပျိုရိုင်းလေးမဟုတ်တော့သောထွေးမြ သူမဘာဖြစ်ချင်နေပြီဆိုတာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပင်။ဦးချစ်ခင်လည်း ရရှိလာသောအချိန်အခါကို အကျိုးရှိရှိ အချိန်မဆိုင်းတော့ဘဲ မသိမသာမှ၊သိသိသာသာပင် ထွေးမြ ပေါင်တံတလျှောက် စုံချည်၊ဆန်ချည်ပွတ်သပ်လို့ ပေးနေလေသည်။ တခါတခါ အပေါ်မှဖုံးထားသော ထမီခေါက်ကြားထဲသို့ လက်သွင်းပြီး ပေါင်တွင်းကြောလေးများကိုပါ ရွရွကလေးပွတ်ပေးသောအခါ….ထွေးမြမှာ ဘယ်လိုမှတင်းမခံနိုင်တော့ တလူးလူး တလွန့်လွန့် ထွန့်ထွန့်လူးကာနေလေတော့သည်။သီးချိန်တန်သီး..ပွင့်ချိန်တန်ပွင့်ဆိုပေမယ့် မထွေးလေးတစ်ယောက်မှာမူ သီးချိန်မတန်သေးဘဲ၊ သီးလိုက်တဲ့ မောင်ခိုင်ကြောင့် ပွင့်ချိန်မတန်သေးဘဲ ပွင့်လိုက်ရလို့လားမသိ နည်းနည်းလေးတောင် အထိမခံနိုင်။ ဖေကြီးသော..ဘာသောနားမလည်၊ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်၏ အထိအတွေ့ကို တရှိုက်မက်မက်ခံစားချင်သည် ။ ကာမ၏ကျေးကျွန်ဘဝသို့ ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး သက်ဆင်းရလေပြီ။ဖေကြီးရင်ခွင်ထဲ မျက်နှာလေးကို ကွယ်ဝှက်လိုက်ရင်း တရွရွနှင့် သူမကို ကာမအမှောင်ထဲဆွဲခေါ်နေသော ဖေကြီးလက်ချောင်းကလေးများကို သူမလက်နုထွေးလေးဖြင့် ဆုပ်ကိုင်ထားလိုက်သည်။
”ယားပါတယ်..ဖေကြီးရဲ့ ”နှုတ်ခမ်းဖျားလေးမှ မပွင့်တပွင့် ။ ဘယ်သူမှ သင်ပေးစရာမလိုတဲ့ မိန်းမတို့ရဲ့ မွေးရာပါအတတ်ပညာနဲ့ ညုတုတုလေးပြောလိုက်သည်။ ဆေးခြောက်အစွမ်းကြောင့် ရီချင်သလိုလို ၊ပျော်သလိုလို စိတ်လေးမှသည် ရင်ထဲ တွင်ကတုန်ကရီ နှင့် လှိုက်မောလို့လာလေသည်။”သမီးနဲ့မောင်ခိုင် ညတိုင်းလိုးကြတာ ဖေကြီးသိတယ် ”’အို……ရှင် ၊’ ထွေးမြမှာ ညတိုင်းလိုးကြသည်ဆိုသော စကားလုံးရိုင်းရိုင်းကြီးကြောင့် စောက်ခေါင်းလေးထဲမှ စောက်ရည်လေးများ တစိမ့်စိမ့်ထွက်ကျလာအောင်ပင် ရင်ထဲလှိုက်ခပ်သွားလေသည်။ဦးချစ်ခင် ထွေးမြဖိထားသောလက်ကို အတင်းမရုန်းဘဲလက်ချောင်းလေးများကို ကာလသားဘဝက မယ်ဒလင် လက်ကွက်နှိပ်သလိုမျိုး ပေါင်တွင်းကြောကလေးများကို အနည်းငယ်အားထည့်ပြီး ကုတ်ပေးလိုက်သည်။”အို…အဟင့်..ဟင့်..”ဖိကိုင်ထားသော လက်များပြေလျှော့သွားလေတော့သည် ။ မျက်နှာဝှက်ထားသော ထွေးမြ၏ပါးပြင်နှင့်နားရွက်ပေါ် သူ၏နှာခေါင်းမှ ထွက်သက်လေပူများကို ထိအောင် မှုတ်ထုတ်လိုက်ပြီး နားသံသီးလေးနှင့် သူ၏နှုတ်ခမ်းကိုမထိ တထိ ၊ ထိကပ်ကာ…”အလိုးခံရတဲ့..အရသာကိုကြိုက်လားဟင်””အို………..”ဘယ်သူမှ ကြားမသွားနိုင်ဘူးဆိုတာသိပေမယ့် လေသံတိုးညှင်းညှင်းလေးဖြင့် ပြောနေရင်း လက်ချောင်း ကလေးများက ပေါင်တွင်းကြောကို ပွတ်သတ်နှိုးဆွနေရာမှ ပေါင်ခွဆုံမှစောက်ဖုတ်ဖေါင်းဖေါင်းကလေးကိုထမီပေါ်ကပင် အားမထည့်ဘဲ လက်သဲထိပ်ကလေးများနှင့် ပင့်ကူလေးတစ်ကောင် သားကောင်ကိုတိုက်ခိုက်နေသလို စုံချည်ဆန်ချည်ပြေးလွှားနေသည်။ထွေးမြရင်ထဲတွင်လည်း အာဖရိကလူရိုင်းတွေရဲ့အမဲလိုက် ဗုံသံလို တဒိန်းဒိန်း၊တဒုံးဒုံး ။ကိုယ့်ခြံထဲကကြက် ဘယ်အချိန်ရိုက်ချက်ချက် ရတယ်ဆိုပြီး သမီးလေးကို ကဝေသည်ကြီးလိုပြုစားနေတာလား ဖေကြီးရယ်…တစ်ခုခုလုပ်လိုက်ပါတော့။”အို…..အဟင့် ”မထွေးလေးခမျာ သနားစရာပင်။ တအိုအိုနှင့် တကယ့်မုဆိုးနှင့် တွေ့တော့ အလူးအလဲခံနေရလေပြီ ။ ကာမကို လိုချင်နေသောအသွေးအသားတောင့်တမှုကြောင့် ခုန်နေသောရင်ပွင့်ထွက်မသွားအောင် ဖေကြီးရဲ့ကျောပြင်ကို တင်းတင်းကြီးဖက်လိုက်လေတော့သည်။
ဦးချစ်ခင်တစ်ယောက် မညှာမတာပင် ထွေးမြလည်တိုင်လေးကို နှုတ်ခမ်းဖြင့်ဖွဖွကလေးနမ်းနေရာမှ ပြွတ်ကနဲမြည်အောင်ပင်စုပ်လိုက်သည်။”အို…ဖေကြီးရဲ့…အဟင့်ဟင့်….”ထွေးမြလေးမှာ ငရံ့ပြာလူး တလူးလူးတလွန့်လွန့်ဖြင့် အဖုတ်ထဲမှစောက်ရည်များမှာ တစိမ့်စိမ့်မဟုတ် ပွက်ကနဲပွက်ကနဲထွက်ကုန်တော့သည်။ ဦးချစ်ခင်၏ အောင်မြင်မှုအထိမ်းအမှတ်များကတော့ မထွေးလေးရဲ့လည်တိုင်ပေါ်တွင် စွန်းထင်းလို့ကျန်နေခဲ့လေပြီ သူ၏အတွေ့အကြုံများအရ ရွှေရောင်အချိန်ရောက်ပြီ ။ အချိန်မဆိုင်းတော့….. သေသေသပ်သပ်နှင့် သွက်သွက်လေးပင် ထမီကိုဆွဲချွတ်လိုက်သည် ။ ကျင့်သားရနေသော လက်ကတော့ စောက်ဖုတ် နှစ်ခြမ်းကြား သို့ဝင်ရောက်သွားပြီး ရွှဲကျနေသောစောက်ရည်လေးများနှင့်ပလူးပလဲ စိုစိုရွှဲလို့နေလေပြီ။ စောက်ခေါင်းလေးထဲ ထိုးမထည့်ဘဲ ပြူးထောင်နေသောစောက်စေ့ကလေးကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးဖိကာ….’တစ်၊နှစ်၊သုံး၊လေး၊……..ထားခင်သမီး မင်းဘယ်လောက်ခံနိုင်ရည်ရှိမလဲ….’ ”ပလွတ်..ပလွတ်ပြွတ်………… ” ”အားးးးးးးးးအမေ့…အိုး ဖေကြီး..အဟင့်…..ဟင့်”ခပ်ဟဟလေးဖြစ်နေသော ပေါင်နှစ်ချောင်းကို အတင်းပူးကပ်ကာ စောက်ရည်ဖြူပျစ်ပျစ်လေးများ ပူကနဲ၊ပူကနဲ နှင့်တပွက်ပွက်ထွက်ပြီး ထွန့်ထွန့်လူးမျှခံစားပြီးထွေးမြ တစ်ချီပြီးသွားလေတော့သည်။’သြော်..အချက်နှစ်ဆယ်ထိအောင်တောင် ခံနိုင်ရည်မရှိသေးပါလား သမီးလေးရယ် ပြီးပါပြီ။